Ngesikhathi sakudala uma kukhona umuntu oshonile ekhaya kukhona izinto ezazenziwa esezihlukile kunesikhathi esiphila kuso. Sibenengxoxo noBaba uPhakathikwezinja Ndlovu, mayelana nokufa noma nokushona komuntu ngezikhathi zakudala. Kudala uma umuntu eshonile ubengayiswa emakhazeni futhi ubangahlaliswa isikhathi eside engagcwatshiwe, namabhokisi ayengekho umuntu wayegoqwa ngesikhumba sesilwane esihlatshiwe ekhaya. Esikhathini esiningi ubengcwatsha ngosuku olulandela lolo ashone ngalo noma bebengadlulisi izinsuku ezimbili. Bebengayiswa kodokotela, umuntu ubengcwatshwa ephelele engahlinzwa njengoba sekwenziwa manje ukuhlola ukuthi ubulawe yini futhi nezihlobo ezikude zazingalindwa bezifika seziyobeka itshe ethuneni. Lapho ekushonwe khona kwakubonakala ngokuthi kugcotshwe umlotha emawindini, lokhu kwakuwuphawu lokuthi behlelwe ifu elimnyama, ngoba isifo asimenyezelwa nezingane zakulomuzi akudingeki ukuthi zehle zenyuka. Abantu basendaweni yibo ababefika nokudla okuphekiwe ngosuku okuzongcwatshwa ngalo.
Esikhathini sakudala kwakujwayeleke ukuthi kushone abantu asebebadala kakhulu mhlawumbe abanekhulu leminyaka noma izingane ezisencane ngesikhathi unina eyibeletha noma isakhasa. Ngokuhlalelana kude kwezihlobo noma umndeni ngenxa yomsebenzi noma yokungakhelani eduze. Abantu abaningi bebephupha izinto ezithile okuthi uma bethola incazelo kusho ukuthi kukhona oshonile. Amaphupho abika isifo kujwayeleke ukuthi kube umshado, noma yindlu eyakhiwayo, noma igobhozi lendandatho yomshado noma ngesinye isikhathi umuntu avelelwe yizinto ezimbi njengokugcwelezwa noma ukungazwani nabantu ngezinto ezincane abanye baphupha inyama. Ngenxa yokuthi abanye babengenayo indlela yokwazisa izihlobo ezikude noma labo abasebenza kude labo babezwa ngabantu abasuke bevela emakhaya.
Uma kushone umnumzane kuhlatshwa inkabi abeyithanda nenonile ukumphelezela, bese egoqwa ngesikhumba saleyonkomo, inyama ibidliwa kodwa ingafakwa usawoti ngoba inyama yobubi, notshwala obabuphuzwa babebuphuza buze buphele okhambeni bungambozwanga, babenenkolelo yokuthi kumbozwa ukufa uma kumbozwa lolotshwala. Kodwa zazingavumelekile izingane ukuya emgcwabeni nolusha lwabe lungavumelekile. Abantu abadala kuphela ababevumelekile ukuba semgcwabeni abesilisa nabesifazane. Begqoke ngendlela ehloniphekayo ukuhlonipha lowo oshonile. Uma sekungcwatshiwe wonke amalunga omndeni azokwenza usiko lokugunda ikhanda nokufaka isichibi engalweni, uma kuwumnumzane oshonile umama uzila ngengubo nangeduku elimnyama noma eluhlaza, ubaba yena uzila ngebhande elifakwa engalweni elimyama noma omunye umbala. Mekushone inkosi kuyazilwa endaweni ngokuthi amadoda angahlangani nabafazi bawo.